TRUESTORY: ပြည်သူဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ အသုံးချခံ တွေလား????????
ပြည်သူဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ အသုံးချခံ တွေလား????????
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ နိုင်ငံေ၇း
သမားတွေ မဲရဖို့အတွက် မဲဆွယ်ကြ
လက်ရှိ အနိုင်ရပါတီကလဲ ကိုယ့်ပါတီ
အနိုင်ရရေး မဲဆွယ်ကြ စည်းရုံးကြတာ ၎င်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ ရော အတိုက်အခံေ၇ာ ဟာ ပြည် သူလူထုကို လှည့်စားခြင်း ၊ ပြည်သူလူထုကို ချနင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့နဲ့ အတိုက်အခံဖြစ် သူများ အ ခက်တွေ့စေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရန် အလွန်လိုအပ်ပေသည်။ ယခုလောလောဆယ်ပင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်းမျိုး အားလုံးသိရှိကြပေသည်။လက်ရှိအစိုး ရ ခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးချုပ် ကလည်း ၎င်းတို့ အာဏာဆက်လက်တည်နိုင်ရေးအတွက် ယခင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်း သက်ဆင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် လာနိုင်ရေး အတွက် ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် တင်သွင်းသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်ကား အစိုးရနှင့် လွှတ်တော် မှာ သာ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အခွင့်ရှိသည်။ ၀န်ကြီးချုပ် တင်သွင်းသော်လည်း ပြင်ဆင်မည် ၊ မပြင်ဆင် မည်ကား လွှတ်တော် တွင်သာ ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်။လွှတ်တော်သည် ပြည်သူလူထုက တင်မြှောက် ထားသူ အမတ်များ ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေ လိမ့်မည်။ သို့သော် အတိုက်အခံ ပါတီ က မကျေနပ်၍ တစ်စခန်းထလာသည်။ထောက်ခံသူလူထု ကို မြှောက်ပေးပြီး ဘန်ကောက် မြို့တော်ကို ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး အစိုးရ ယန္တရား ရပ်ဆိုင်းအောင် ကြိုးစားလာသည်။ အစိုးရကို နှုတ်ထွက်ခိုင်းပြီး အာဏာကို အပ်ခိုင်းသည်။ အတိုက်အခံပါတီ အနေဖြင့် အစိုးရကို ဝေဖန် ပြောဆိုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့အား ထောက်ခံသူ ပြည်သူလူထုကို ဗန်းပြပြီး အနိုင်ရပါတီ နှင့် အစိုးရ အပေါ်တွင် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခြင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပေ။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် စတင် ရွေးကောက်ကတည်းက မဲ အများဆုံးရသည့် ပါတီ က အနိုင်ရပြီး အစိုးရ ဖြစ်သည့်အတွက် မဲစနစ်ဖြင့်သာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအကျိုးအတွက် မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အစိုးရ ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံသားများကလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ထောက်ခံမည် မဟုတ်ပေ။ ယခုဆိုလျှင် မြို့တော်ဘန်ကောက်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားများ ရပ်တန့်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံရေး ၊စီးပွားရေး ထိခိုက်သည်။ အတိုက်အခံနှင့် အစိုးရ အာဏာလုသည့်ကြားထဲတွင် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူ၏ အကျိုးစီးပွား ဆုံးရှုံးသည်။ ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်း အာဏာသိမ်းရန် ပြင်ဆင်နြေ ပီ။ အာဏာသိမ်းပြီးလျှင်လည်း ချက်ချင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေး နိုင် ဦးမည် မဟုတ်။ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ခန့် အချိန်ယူပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေး ဆွဲပြီးမှ သာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသည်လည်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ကို အစမှ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရပေလိမ့်မည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာ များမှာ ယခု လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေသော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်သည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူ အတွက် အကျိူးစီးပွားသာ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေး ကျဆင်းသည့် အချိန် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားကြလျှင် မကြာမှီ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံထက် စီးပွားရေး တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ အတူ ယခုအချိန်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆန်ရှင် ရုတ်သိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာသလို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုလည်း အိမ်ရှင်အဖြစ်အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို လျှင်လျှင်မြန်မြန် စနစ်တကျနဲ့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ သမ္မတကြီးရဲ့ ကြိုးစားမှု မပါဘူးလို့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုမှ ခေတ်သစ် စနစ်သစ်ကို အကူးအပြောင်းကာလသာဖြစ်လို့ အရမ်းမျှော်လင့်ထားလို့တော့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက် အားမရသေးသူများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ရေတွင်းတူး အခု ရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့ ဘယ်ရနိုင်မလဲဗျာ။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကြိုးစားဦးဆောင်နေသလို နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း မပြစ်ပယ်ထားဘူးဗျ။ တစ်နိုင်ငံလုံးကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ မြစ်ဆုံ ကိစ္စမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကြောင့်ဆိုပြီး ၇ပ်ပစ်ခဲ့သလို တိုင်းရင်းသား ကိစ္စတွေ မှာလည်း အများ စိုးရွံ့နေတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလီ ကိစ္စကို လည်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး ဆိုတာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မပါခဲ့တဲ့ လူမျိုး၊ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေပါ ဆိုပြီး အတိအလင်း ဖော်ထုတ် ကြေငြာပေးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုး၊ ဘာသာ နဲ့ နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် အခု ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေပြီ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး လိုလားနေကြတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရဖို့ အချိန်ယူတည်ဆောက်မှသာ တကယ်အခြေခိုင်ခိုင်နဲ့ စနစ်တကျ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ မယိမ်းမယိုင်ပဲ ရှေ့ကို သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် တိုင်းပြည် နဲ့ ပြည်သူ အတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ခုကတော့ ပေါ်ပေါက်လာပါပြီ ။ အဲဒါကတော့ အတိုက်အခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စိန်ခေါ်သံ စကားတစ်ခွန်းပါပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အစိုး၇နှင့် တပ်မတော် သဘောမတူပါက လူထုအားဖြင့် ပြင်ဆင်မည်တဲ့။ ကျွန်တော် အထက်မှာ တင်ပြခဲ့သလို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်တယ် ဆိုတာ လွှတ်တော်မှာပဲ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် အတည်ပြု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူ လူထု ကို လမ်းပေါ်တင်ဆွဲပြီး လိုရာအချက်ကို တောင်းဆိုမယ် ဆိုလျှင် ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံေ၇း အခြေအနေ လို ဖြစ်လာမည် ဆိုပါက အားလုံးမျှော်လင့်နေသော ဒီမိုကရေစီသည် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး ဆိုသလို သာ ဖြစ်နေပါတော့မည်။
Posted by TRUE STORY at 2:10 PM